/Blog/Oral turinabol/Nhengo yemutambo turinabol powder: Unoziva here chokwadi nezvehupfu hweSteroid?
Posted on 12 / 17 / 2017 by 阿斯劳 akanyora Oral turinabol. Izvo zvine 1 Comment.
1.Chii Oral Turinabol? 2.Oral turinabol powder nhoroondo
3.Chiiko Oral turinabol powder? 4. Ndezvipi zvakajairika kubva kuOral turinabol powder?
5.How Oral turinabol inoshanda sei? 6.Benefits of Oral turinabol yekuvaka muviri
7.Ziko zvinobatsira zveOral turinabol? 8.Oral turinabol uye injekiseni turinabol mukuvaka muviri
9.Oral turinabol Doses uye Mutungamiri 10.Recommend dosage ye Oral turinabol
11.Medical dheji yeOrmal turinabol 12.Dosage Oral turinabol yekuvaka muviri
13.Oral Turinabol Kwevakadzi?
Oral turinabol poda powder video
Molecular Kurema: 314.63200
Chii chinonzi Oral Turinabol?
Oral Turinabol(Chlorodehydromethyltestosterone, inozivikanwawo se'Tbol 'neTurinabol), ndeye testosterone series for mukusimbisa muviri(iyo yakazivikanwa saiye testosterone enanthate ), chaizvoizvo chimiro chakachinjwa che Dianabol (Methandrostenolone), iyo inenge iine kusanganiswa kwemakemikari e Dianabol uye Clostebol (4-chlorotestosterone). Nokudaro ichi ndicho chikonzero chaiwo maikemikari zita rinonzi 4-chlorodehydromethyltestosterone. Izvozvo zvinogadziriswa kumakemikari ayo anoita kuti zvive zvisina kuchena uye kuti ivewo nechechi yakanyanya uye androgenic, izvo zvingangodaro nei Turinabol yakatumidzwa se "Dianabol" munyoro.
Oral Turinabol (OT) yakafanana zvikuru mukugadzirwa kwemethandrostenolone. Kusiyana chete, chokwadi, ndiko kuwedzerwa kweatomu ekoridhi panzvimbo yeC-4. Mutemo-turinabol ine mukurumbira wekuva steroid yakanaka zvikuru. Kuwedzerwa kweatoriyamu inobvisa kukwanisa kwekunakidza nekuvhara rusununguko neAromatase uye kunoderedza kutendeuka kuDHT. Misiyano yakakura ndeyokuti OT inogona kuva nehafu yenguva-hupenyu iyo inogadziriswa nechepasi kwayo yakabatana uye Oral Turinabol inoratidzika kuva nehukama hweSBBG kupfuura methandrostenolone iyo inogona kuita kuti testosterone uye estrogen iite kuti iparidze.
Oral turinabol powder nhoroondo
Oral Turinabol yakatanga kuburitswa naJenapharm kunze kweEast Germany mu1962. Steroid yaizonakidzwa nekuchengetedzwa kwakanyanya kwemakumi emakore kwete chete pakati pevarume asi mumadzimai uye kunyangwe vana munzvimbo yekurapa. Iyi anabolic steroid (AS) yakaratidza kuti yakabudirira zvikuru mukuedza kuvaka kana kuchengetedza kuonda kwemafu uye bone masikati pasina zvinetso zvakakomba. Zvisinei, Oral Turinabol yaizocherechedza nyika yose muZ1990 apo East East steroid yakaipa yakava ruzivo rwevanhu.
Kubvira ku1974 kusvika ku1989 chii chaizozivikanwa seEast German Doping Machine chakanga chabudirira mukugadza anabolic steroid kune vatambi vayo veOlympic. Havasi kungoidza chete asi ivo vakanga vachienda neiri steroids saOral Turinabol, panguva iyoyo, isingaoneki. State Plan Research Research Theme 14.25 sezvazvaizivikanwa zvepamutemo zvakare ingashandisa epitestosterone munguva ino kuitira kuti tisaverengera kuverengera testosterone mukuedzwa kwezvinodhaka.
Apo Oral Turinabol yakawanikwa sechikamu chinokosha cheEast German shanje Jenapharm yaizosiya chigadzirwa mu 1994. Makore maviri gare gare musimba wemishonga kubva kunze kweGermany Schering, vanoita steroid dzakadaro sa Primobolan, Testoviron naProviron vaizowana Jenapharm asi vakasarudza kusaunza Oral Turinabol kumusika. Kubva panguva iyoyo iyi anabolic steroid haina kumbobviswa nemakambani echokwadi anokonzera mishonga uye yava misika yakasviba pasi pedenga anabolic steroid.
Chii chinonzi Oral turinabol powder?
Oral turinabol yakasvibirira, iyo yakasvibirira yemishonga Chirwere turinabol, iyo inonzi White kusvika powder, vazhinji vanowbobo steriods michina yemutengesi kazhinji vanotenga kuchena kwakanyanya Oral turinabol pombi yakasvibiswa, zvino itaita iyo mapiritsi eOral turinabol.Ku marusi, kuchena kweOral turinabol yakasiyana, kazhinji inobva ku60% -99% kuchena, nemutengo wakasiyana.
Tsanangudzo yeOral turinabol powder sezasi:
Zita: Oral turinabol
Maonero: White powder
Simba: Isingaverengeki mumvura kana doro, inogadziriswa muAcetic acid, ethyl ester
Kurasika pakuoma: ≤0.5%
Kutanga nguva: maminetsi makumi maviri
Bhuku: Mishonga yeGrade
Ndezvipi zvakajairika kubva kuOral turinabol powder?
Mumusika, kune maitiro akasiyana ehurukuro yeinorinabol, seOrmal turinabol mapiritsi, mahwendefa, uye Oral turinabol capsule. Izvo zvose zvinobva kuOral turinabol powder.Ungatenga nyore nyore mahwendefa eOalalinabol muchitoro chekumba, zvichida zvidhura kana Tora Orin turinabol powder online. Zvichave zvakanaka.
Ko Oral turinabol inoshanda sei?
Oral Tbolworks semhando yakashandurwa ya Dianabol (Methandrostenolone); kusanganisa Dianabol naClostebol (4-chlorotestosterone) .Ipapo iyo yakawanda yemakemikari yakarongeka yakafanana ne Dianabol, iri hormone yakaoma zvikuru. Kana Tbol isisina simba kupfuura Dianabol inoramba iine zvipo zvakasiyana-siyana, pasina mitezo inobatanidza steroidsi inowedzera oestrogen. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira kuona zvakasimba, kana zvisingaiti zvinosvibisa musimba, zvisingaiti chero kuputika, kuchengetedza mvura kana gynecomastia.
Pamusoro pebasa rinoshandiswa maitiro eOral Turinabol ari nyore kwazvo. Kufanana nevakawanda anabolic steroids iyo inofanira kuva nemigumisiro yakanaka pamaprotheni synthesis uye nitrogen kuchengetedza, pamwe nekuwedzera kuwedzerwa ropa rekuyera masero. Izvo zviito zvose zvinokosha sezvavanowedzera hupenyu hwevanabolic hwomunhu oga. Puroteni inowanikwa muprotheni iyoyo ndiyo inonyanya kukosha kuvaka chivako chemisungo uye inopindirana inomiririra chiyero icho masero anovaka mapuroteni, uye nitrogen kuchengetedza pakuti inomiririra chikamu chinokosha chemavara akaonda.
Kushayikwa kwe nitrojeni kunotungamirira kune mamiriro ehurumende, apo semari yakakwirira yakachengetwa ichasimudzira kunakidza vanabolic atmosphere. Zvadaro tine masero matsvuku eropa, ayo ari kutakura kutakura okisijeni kusvika uye kuburikidza neropa. Mamwe masero matsvuku eropa achaenzanisa nekuwedzerwa kweropa mumhepo, izvo zvichange zvakaenzana nekuwedzera kutsungirira kwemisungo. Zvose izvi zvichange zvichinyatsobatsira kuburikidza nekukwanisa kwemuviri kugadzirisa.
Mabatsiro eOrmal turinabol yekuvaka muviri
Ndezvipi zvinobatsira zveOral turinabol yekuvaka muviri? Ngationei.
Zvibereko zvisingabatsiri kuwana (izvi zvinobatsira mune zvemitambo uko uri kuedza kuita uremu kana kukwikwidzana mune imwe nzvimbo yezviremera)
Misi miviri isina kutarisa
Kuwedzerwa musimba mumiko yakaonda
Simba rekusimbisa zvakasimba SHBG
Wedzera mu testosterone pasina
Iyi steroid yakanga inobatsira vatambi sezvaiita kuti kuwedzere musimba mumiviri yakaonda, pasina chero chinhu chinokosha chokuchengetedza mvura, kana kusina kuwedzera mune estrogen zvakare.
Kunyange zvazvo chivakwa chemuviri chichibatsiro cheArmal turinabol chiri pasi pezvimwe vana vanabolic steroid yakafanana Dianabol, iwe uchawanzowana steroid iri kushandiswa mu "masaga" nemazimba.
Chikonzero cheizvi ndechokuti iyo inogona kubatsira kukura pasina (kushanda) Testosterone mazinga nekuda kwaro achiita nezvehutachiona hunosunga globulin (SHBG). Izvi zvinobatsira kuwedzera mararamiro emamwe steroid anoshandiswa.
Ndezvipi zvinobatsira zveOral turinabol?
Nekuda kweOral turinabol yakasarudzika kupatsanura kwayo androgenic kune vanabolic mhedzisiro, iyo isina simba anabolic steroid kupfuura mubereki wayo hormone Dianabol. Nekudaro, iyo vimbiso naTbol ndeyekuti nechero ipi inoratidzika kugona kwemhasuru yekuvaka, inozopa zvakashomeka munzira ye androgenic mhedzisiro uye zvachose isina estrogenic mhedzisiro (nekuda kwekusagona kwayo kunhuhwirira muEstrogen). Nekuda kwesimba rayo risina kusimba kupfuura Dianabol, madosi anodiwa kuti akonzere mhedzisiro kubva kuTbol anoonekwa kunge akanyanya (izvi zvichatsanangurwa munguva pfupi muchikamu cheTbol doses yeiyi profil).
Pasi pose, vatambi uye varimi vanogona kutarisira kugadzikana uye kwehutano hwakakosha huwandu hwemhando pasina pangozi yekubvisa chero kupi zvako, gyno, kana zvimwe zvinokonzerwa nesrogenic. Misa uye simba rinobudirira hazvizivikanwi kuti zvinoshamisa nekuda kwekushaikwa kwayo kwevanabolic simba, asi kugadzikana uye kwehutano hunobudirira huri kukura nguva dzose pane nguva inogona kutarisirwa. Inoshandiswawo seyakanaka yekucheka mujeri munguva dzekurasikirwa kwemafuta kana kusati kwatanga kugadzirisa nekuda kwekusakwanisa kushandura ku Estrogen. Nhengo dzemumuromo turinabol dzinopenya chaizvo sechirevo kune dzimwe vanabolic steroid kana dzichimhanya (dzakagadzirirwa) nedzimwe vana anabolic steroid pamusana pekugona kwayo kusunga SHBG. Kubhadhara SHBG kunobvumira zvimwe zvevana analiclic steroid iyo yakaiswa pamwe chete kuti iwanikwe kuita basa ravo, isina kudzivirirwa neSBB, iyo imwe yekubatsira iyo inoratidza.
Oral turinabol uye injekiseni turinabol mukuvaka muviri
Misiyano pakati pemuromo uye injectable turinabol yakafanana nemamwe akawanda steroid. Mharidzo inyoreka kutora asi muchirevo zvinogona kuva zvinokuvadza chiropa, saka munhu anogona kuchengetedza zvakanyanya masero ejw.org. Uyezve, injectable inonyanya kuonekwa. Asi, kazhinji, iyi inyaya yezvaunoda.
In mukusimbisa muviri turinabol inogona kunzi rookie. Hazvishamisi - munguva yakapfuura "mambo wemishonga" kuMabvazuva kweEurope aisada kuva methandrostenolone (dianabol) shoma. Yese turinabol yakasvibiswa nechemberi kubva kuEast Germany yakatorwa nemakwikwi ekutamba kwevadzidzi. Western Europe neU.SA kunyange vasina kuziva kuti chigadzirwa chakadaro chiriko, zvisinei hapana vashandi vehupenyu vakarondedzera kuti vakamboishandisa. Mamiriro ezvinhu akachinja kwete kare kare apo ichi chinodhaka chinodhaka chakapiwa mukana wechipiri uye chaive nekubudirira kunoshamisa pamusika weAmerica uye pfupi pashure payo mune dzimwe nyika dzose.
Ndezvipi zvikonzero zvekubudirira uku? At-kutanga turinabol inowedzera simba. Chechipiri, sezvakataurwa, murinabol oral inokurumidza kubva mumuviri uye isingawani muurini mukati meZ6-8 mazuva mushure mekushandiswa kwekushandiswa. Hatina kunzwa pamusoro peiyo zvakanaka doping miedzo ye turinabol. Zvisinei, zvinogona kuva nokuti kuedza kwakadaro hakungori kuitwa nhasi.
Chimwe chinhu chakanaka chechirwere chinogona kuonekwa sekupa kuoma kumisungo pasina kunyanya kukosha kwemvura. Nhoroondo inoratidza kuti kushandiswa kweTinabababol kunoda kushandiswa mumakwikwi ekugadzirira masaga. Uyewo inobata nebasa rekuchengetedzwa kwemasisita mashoma kuparadza kuparadzwa mushure mekunyengera.
Pane chimwe chiitiko che turinabol - i "sex drug». Iyi steroid inokurumidza kuwedzera libido yevarume, dzimwe nguva yakawandisa, saka chido chekuita zvepabonde chinowedzera kudiwa kwekudzidzisa Ichi chivako, pamwe nekukwanisa kungoita kuti zvishoma zviitwe kugadzirwa kwe testosterone isingagumi, inoita kuti zvive nemishonga inobatsira kutora muyero yakaenzana pakati pe maitiro e "nzara" AAS kuchengeta zvekuita zvepabonde.
Oral turinabol Doses uye Mutungamiri
Oral turinabol ine chirwere chakasimba che-androgenic che6 uye anebolic simba yekodzero ye53, izvi zvinoita kuti zvive pedyo zvakakwana pakuenzanisa migumisiro nemigumisiro. Pamusana pezvakaderera zvakanyanya uye androgenic rating, acne, utsinye, kutsamwa kwakasimba uye kuwedzera kwesimba hazviwanzovi, asi kwete. Kuenzaniswa nemubereki wavo hormone Dianabol, iyo inobata vanabolic uye mizimba inoratidzika haisi kuona Oral Tbol senhengo yekuwana mujeri.
Nyora kukosha kweOrmal turinabol
Oral turinabol inenge inenge hafu yeanbolic rating ye Testosterone, saka inowanzokurudzira kuongororwa kweOral turinabol iri mumhando ye 20-40mg pazuva. Oral turinaboldosages inogona kupfuudza 40-80mg pazuva, asi varimi vomuviri vanotaura migumisiro yemitambo inotanga kusimuka, asi kupfuma kunoramba kuripo.
Kurapa kwechiremba yeOral turinabol
Mishonga yeAraal turinabol inenge yakapoteredza 5-10mg pazuva uye inopiwa kune vane musimba kuparadza zvirwere. Mishonga yezvechirwere chechikadzi inotanga pa 1mg pazuva uye inogona kudarika 2.5mg zuva nezuva (QC).
Nhamba yeMuromo weTinababol yekuvaka muviri
Kutanga Mutemo weTinababol doses inoratidzwa pa 20-40mg pazuva.
Vashandi vepakati vanogona kushandisa 40-60mg zuva nezuva.
Vashandi vepamusoro uye vashandi vanogona kushandisa 80mg pazuva, iwe zviri nani kwete kupfuura 80mg / zuva, Zvisinei, izvi zvinowedzera kukanganisa zvinogona kukonzera miitiro yakanyanya uye mamwe androgens anogona kushandiswa nekuwana zviri nani.
Vatambi veEast Germany vakadzi vakatora OT pa5-15 mg pazuva pazuva kwemavhiki maviri kusvika matanhatu panguva. Kunze kwekuratidzwa kuri pachena, vazhinji vevatambi vechikadzi ava vakatamburawo nechiropa, chirwere chemwoyo, kushaya mbereko, nyaya dzepfungwa, uye kunyangwe kufa. Oral Turinabol inopupurirwa kusave yakachengeteka anabolic steroid yevakadzi. Ini handisi kuti mhedzisiro iyi haidziviriki, asi asi kuti ichokwadi chakaratidza kuti chiitiko chezviitiko zvakadaro chakanyanya.Saka chaizvo hatikurudzire munhukadzi kutora mushonga uyu.
Turinabol Zvinyorwa uye Mashandisi (for reference only)
Izvo zvinofanira kuonekwa kuti hazvibviri kutsanangurira zvakakwana masero pasina chero dhesi pamusoro pezviratidzo zvepanyama zvemutambi, ruzivo rwake mukushandiswa kwevanabolic uye androgenic steroids, zvinangwa zvake uye zvimwe zvinhu.
Kuvhara kwemuromo weininabol
Zvakanaka kune vatambi vemitambo, powerlifters kana kuti bodybuilders pakucheka masaga. Asi kana mafuta akakomba-achipisa adikanwa, haazombobatsiri nokuti iri steroid, kwete mafuta akachena-anopisa.
1) Turanabol 35 mg / ED kwemavhiki matatu pakuguma kwe deca-dianabol-testosterone cycle kuti ape rubatsiro
2) Turanabol 50 mg / ED kwemavhiki e6 neParololan (200 mg / w) uye / kana Stanozolol (150 mg / w) pakuguma kwemukati wevhiki ye 2-3 (zvichida kubva pakutanga kwemukati)
3) Turanabol standalone cycle 50 mg / ED kwevhiki dze6. Lean mass / pre-competition stack.
4) Panguva yekugadzirira kusunga turinabol inowanzobatanidzwa ne trenbolone, oxandrolone kana stanozolol. Migumisiro yakanaka kwazvo inowanikwa nekubatana ne testosterone propionate.
5) Kusanganiswa kwemuromo wetinababol + oxandrolone haina simba, rinogona kukurudzirwa chete kuvakadzi.
6) Unogona kushandisa muromo uye injectable turinabol panguva yekuunganidza-kuunganidza mumakwikwi akasiyana-siyana, somuenzaniso ne testosterone, nandrolone kana kusanganiswa kwayo, pane methandrostenolone (dianabol). Inokurudzirwa kune avo vatambi vanoda kuwana mishonga yakanaka.
PCT inodiwa mushure mekuwanda kwedzidzo idzi.
Oral turinabol hafu yeupenyu
Ihafu-yehupenyu yeOral turinabol mumabhuku esayenzi mushure mekunyorwa kwe IV ndiyo 16 maawa; zvisinei, iyo murinabol yemuromo hafu yeupenyu haisi iyo yakafanana. Kazhinji hafu yeupenyu yekutaura nemuromo yakareba kupfuura iyo yehutungamiri hwe IV, zvisinei, munyaya iyi inogona kunge ichingopfupika nemhaka yekutanga kudarika metabolism uye kuderedzwa kwepamusoro kweplasma mazinga zvichienzaniswa neyedzivo yeV. Imwe pepa inoratidza kuti hafu yehafu yeupenyu. Kuongororwa kwakanaka kwemaawa masere masere kwehafu yehupenyu ye steroid iyi pamwe nekuda kwechokwadi pakati pe12 nemaawa 20. Ichokwadi kuti metabolites ye steroid ino inogona kuonekwa kwenguva refu mushure mekupera kunotora kwenguva refu.
Migumisiro Yechipfuva yeMutauro turinabol
Turinabol inozivikanwa seimwe yevanyoro anabolic steroids, inowanzoiswa munzvimbo imwechete se Anavar uye Primobolan.Ukushandisa steroid iyi hakuzovi nehutano hweweserogen yako, saka ndeyeye yakachengeteka steroid yevakadzi yekushandisa.
Izvo zvakachengeteka kupfuura many steroids, kushandisa Oral turinabol haisi pangozi. Heano mamwe emigumisiro yemigumisiro yeOral turinabol yaungasangana nayo:
Kubvisa kwechibereko chekuberekwa kwe testosterone
Kuwedzera kweLDL (yakaipa) cholesterol
Yakaderera HDL (yakanaka) cholesterol
Nyaya dzehutano / Lower sperm count
Kuwedzerwa kunetseka pachiropa
Kukanganiswa kwemvere kunogona kuitika
Kuwedzera kwebvudzi remuviri kukura
Chero nokuti steroid inogona kukonzera migumisiro yezviitiko hazvireve kuti iwe uchazviona. Isu tose tinoshandisa zvinodhaka uye mishonga zvakasiyana.
Kudzingwa Kwetsika Testosterone
Kufanana neanabolic steroid dzakawanda, kushandiswa kwavo kunogona kutungamirira mumuviri wako kubereka testosterone shoma. Dzimwe nguva mararamiro ako achadzoka kuhupenyu kana steroid yapera, asi izvi hazvisi nguva dzose.
Testosterone yakaderera inogona kutungamirira kune nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira kuwedzera mumuviri wemafuta uye zvishoma musumbu. Iwe unogonawo kutarisana nezvepabonde zvakare, zvakadai sokuderedza libido uye kuderedza mbeu yehuta.
Migumisiro yeCholesterol yako
Kushandisa Oral turinabol kunogona kukonzera kuwedzera kweLDL cholesterol uye pasi peHDL cholesterol. Izvi zvinogona kuwedzera huwandu hwemavara akaiswa mumishonga yako, iyo inogona kutungamirira kune zvinetso zvakadai sekurwadziwa kwemwoyo uye kurwisa.
Kana iwe ikozvino unotambura kubva kuhovha yepamusoro yeholesterol ipapo kushandisa analobolic steroid haifaniri kukurudzirwa.
Unogona kuderedza dambudziko nekushandisa matanho anotevera:
Kudya mamwe mafuta ehove (omega-3 fatty acids)
Zvinganisa nehove mafuta
Ita kuti uwedzere mafuta akazara
Deredza kudyiwa kwako kwemashuga
Tsvaga cholesterol yako yakaongororwa
Usapfurikidza nemimwe steroid oral
Kuwedzera Kungozi Kwechiropa Kuparadzwa
Vazhinji vanabolic steroids vane hepatotoxic, uye Oral turinabol haisi yakasiyana. Kushandisa iyo kunogona kuwedzera kuwandisa kwepfungwa pachiropa chako. Izvi hazvirevi kuti iwe uchakuvadza chiropa chako kuburikidza nekushandiswa kwayo, asi kana usina chiropa chakavamba kutanga ipapo steroid iyi inonyanya kudzivirirwa.Iyo inokurudzirwa kuti udzivise kudya zvinodhaka zvakanyanya doro, nekuvimbisa kuti maitiro ako haapfuuri nguva yakakurudzirwa.
Kutenga Oral turinabol powder
kupi kunotenga Oral turinabol powder?Kana iwe ukasarudza kutenga muromo weTurinabol powder, uri kupinda mumusika wakasiyana zvakasiyana. Unogona kutenga zvigadzirwa zvakananga muchitoro chemunzvimbo, uye unogona kurairwa online online Turinabol, yepasi pevabhoritari vhezheni inowanikwa, ichienzaniswa neiyo shopu, online online procurement yemuromo Turinabol poda inokurumidza uye nyore, kusarudza kwakasimba, asi fungidziro ndiwe uve nemutengi akavimbika wekushandira pamwe kwenguva refu, kana uchitova nemutengesi akavimbika, saka unokukorokotedza iwe, kana zvisiri, AAS ingangova sarudzo yako yakanaka.
Nzira yekuita kuti levitra ibudirire sei Mukadzi Mukadzi Anorwara? Zvose pamusoro peBonde Kuwedzera Flibanserin powder